ကနေဒါ​ ဗဟိုဘဏ်​ အစည်းအ​ဝေးပွဲ နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကနေဒါဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် အတိုးနှုန်းတင်မှု ၂ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်. ယခင်နှစ်က နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည့် ဒီဇင်ဘာလသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲStephen Poloz ပြောစကားများ hawkishဆန်ခဲ့ပါသည်. တချိန်တည်းမှာပင် ကနေဒါ​ ဗဟိုဘဏ်​ အနေဖြင့် တင်းကျပ်သည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကို ကျင့်သုံးရန်အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်.
ကနေဒါဗဟိုဘဏ်ရဲ့ အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ရက် ၀၇:၀၀MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်. ယခုလတွင် အတိုးနှုန်းမတင်နိုင်သေးကြောင်း ဈေးကွက်က သိနေသော်လည်း ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ၁၈:၁၅ MTအချိန်တွင် ပြုလုပ်မည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. ထို့ကြောင့်ပင် ထိုဒေတာများထွက်ရှိချိန်တွင် USD/CADဈေးနှုန်းလှုပ်ခတ်မည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါတော့သည်.